Xuska aasaaskii ururkii gobanimadoonka Soomaaaliyeed ee SYL oo si weyn looga maamuusay gobollada Puntland. – Radio Daljir
Xuska aasaaskii ururkii gobanimadoonka Soomaaaliyeed ee SYL oo si weyn looga maamuusay gobollada Puntland.
Galkacyo, May 15 ? Waxaa deegaannada Puntland maanta weyn looga tabaal-degay sanad-guuradii 67-aad ee ka soo wareegtay markii la unkay ururkii dhallinyarada Soomaaliyeed ee SYL sanadkii 1943-dii, ururkaasi oo ahaa midkii u soo hal-gamay xorriyadda umadda Soomaaliyeed.
Munaasabado aad u waaweyn oo ay ka qaybgaleen madaxda dawladda Puntland iyo xubno ka tirsan hal-gamayaashii u soo dagaallamay xornimada Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Puntland kuwaasi oo lagu muujinayey Qiimaha iyo axmedyadda umadda Soomaaliyeed ay u leedahay maalintaasi.
Magaalooyinka, Garoowe, Booosaaso, Galkacyo, Qardho iyo Baran ayaa ka mid ah meelaha lagu qabtay xafladaha lagu xusayo sanadkii-guuradii 67-aad ee ka soo wareegatay markii la dhisay ururkii gobonima-doonka Soomaalyeed ee SYL, kaasi oo u hal-gamay sidii Soomaaliya ay uga xoreebi lahayd cadawgii gumaystaha, kuna guulaystay in ay dhaliyaan xorriyad taam ah.
Manaasabaddii ugu weynayd waxay maanta ka dhacday xarunta maamulka gobolka ee magaalada Galkacyo, waxaana lagu casumay oo ka soo qaybgalay xubno ka mid ahaa u halgamayaashii gobonimada Soomaaliya kuwaasi oo kala ahaa C/llaahi Jaamac Qaamadhari iyo Maxamuud Yuusuf Aadan ?Muuro? oo labadooduba ka mid ahaa dhallintii ururkii gobonima-doonkaa Soomaaliyeed ee SYL.
Halgamayaashu waxay halkaasi ka akhriyeen taariikh dheer oo ay kaga warramayeen halgankii SYL iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray, iyagoo ka qaybgalayaasha dareensiiyey dhibaatadii loo soomay helitaanka xorriyadda iyo dagaalkii adkaa ee lala galay gumaystihii waddanka haystay.
Labada halgame oo da?ahaan haatan aad u weyn ayaa si qiiro badan uga warramay kaalintii ay ka soo ciyaareen gobonimada Soomaaliya, iyagoo dhanka kala muujiyey xaaladda haatan lagu jiro iyo nacaybka Soomaalida dhaxdeedka ka abuurmay.
Inkastoo labadaan halgame aysan ka mid ahayd 13 dhallinyarada ahaa ee dhidibada u taagay dhismihii ururka, hadana waxay ahaayeen geesiyaal u soo dagaalmay xorriyadda Soomaaliya kana mid noqday ururka, xilal kala duwanna ka soo qabtay, waxaana Maxamuud Yuusuf Aadan ?Muuro? uu ahaa ninkii lagu baddalay C/laahi Ciise ee irbadda sunta ah lagu dhuftay, wakhtigii gumaystuhu ay damacsanaayeen in ay dilaan alle ha u raxariistee C/llaahi Ciise.
Dhanka kale madax kala duwan oo ka tirsanayd maamulka heer gobol, mid degmo, qaar ka mid ah golayaasha dawladda dhexe ayaa munaasabadda ka soo qaybgalay, kuwaasi oo dhammaantood ka hadlay qiimaha ay ugu fadhido umadda Soomaaliyeed 15 bisha May oo ahayd markii la asaasay ururkii SYL sanadkii 1943-dii.
Dhammaanba dhallinta iyo umadda Soomaaliyeed ayaa maanta loo gudbiyey farriimo wax ku ool ah oo lagu cabirayey waxa maanta la gudboon umadda Soomaaliyeed maadama muddo ku dhaw 20 sano ay dawlad la?aan yihiin, waxaana halgamayaashu iyo ka qaybgalayaashii kale xafladuba ay ku taliyeen in loo guntaado midnimada umadda Soomaaliyeed.